Indlela yethu-Abakwa -APICMO cdmo Abakhiqizi
Ukukhiqizwa okuyingqayizivele kanye nokwezifiso, kungasiza ososayensi bephuthumise inqubo yabo ye-R & D emkhakheni wamakhemikhali kanye nemithi.
U-APICMO unikeze amakhasimende we-ICH kuphela ngekhwalithi ephezulu ne-API ephansi yama-API. Yonke imikhiqizo ehlinzekwa yi-APICMO yase-China indawo yokukhiqiza ivivinywa ngokugcwele ngaphambi kokuthunyelwa ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yomkhiqizo. Le sevisi iqinisekisa ukuthi amakhasimende we-APICMO athola imikhiqizo yekhwalithi ngaso sonke isikhathi.
U-APICMO uzibophezele ekuhlonipheni udumo lwemboni yamakhemikhali yamakhemikhali ukuqinisekisa ukuthi zonke izinsizakalo zethu kanye nemikhiqizo zinobuhle bemvelo.
I-APICMO yi-ISO 9001: I-2008 eqinisekisiwe nayo yonke imisebenzi yebhizinisi layo ihambisana ngokuqinile namazinga angaphandle wokuphatha ikhwalithi.
I-R & D isikhungo esiphelele se-Shanghai, ama-lab ahlangene ne-5 anamanyuvesi, izikhungo zokukhiqiza ze-2 eHenan naseJiangsu, kanye nenethiwekhi enkulu yokunikezela eChina, i-APICMO insimu enkulu yobuchwepheshe ihlanganisa ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwamakhemikhali e-heterocyclic (njengama-piperidines, amapiperazines, i-pyrrolidines ...), i-spiro compounds, i-boronic acid, i-benzenes, i-amino acids nama-peptide, ama-chiral, ama-inhibitors, ama-nucleosides & nucleotides, ama-API, njll.